Pompous Inauguration Ceremony of the Pathein Seed Testing Laboratory
ခမ်းနားကြီးကျယ်စွာ ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည့် ပုသိမ်မျိုးစေ့အရည်အသွေးစစ်ဆေးခန်း
Amidstalong wait, finally the Pathein Seed Testing Laboratory was inaugurated by the Hon'ble Chief Minister, U Hla Moe Aung, accompanied by the Regional Minister of Agriculture, U Tin Win Aung, Deputy Director General of the Union DOA, Regional Director DOA and other members from the Township and District Agriculture Departments.
၀န်ကြီးချုပ် ဦးလှမိုးအောင်၊ တိုင်းဒေသကြီး စိုက်ပျိုးရေး မွေးမြူရေးနှင့် သစ်တောဝန်ကြီးဌာန ဦးတင်ဝင်းအောင်၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ တိုင်းဒေသကြီး ညွှန်ကြားရေးမှူးများနှင့် မြို့နယ်နှင့် တိုင်းစိုက်ပျိုးရေးဌာနခွဲများမှ ဝန်ထမ်းများတက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။
Inauguration of the Pathein Seed Lab. The gentlemen from left, Deputy Director General, Chief Minister, Regional Agriculture Minister
This lab was established under the Seed QUALITY Component of the Rice Seed Sector Development (RSSD) project and is equipped with state-of-the-art management and technical expertise. It follows the ISTA and ISO/IEC: 17025:2005 standards of Quality Management System. The Lab will handle about 1000 samplesayear with the peak being around after the harvest of the monsoon rice (Oct-Dec)
ပုသိမ်မျိုးစေ့အရည်အသွေးစစ်ဆေးခန်းကို စပါးမျိုးစေ့ ကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး စီမံကိန်းမှ မျိုးစေ့ အရည်အသွေးဆိုင်ရာ အပိုင်းမှ တည်ဆောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ပိုမို ခေတ်မီသော စီမံကိုင်တွယ်နိုင်မှုနှင့် နည်းပညာကျွမ်းကျင် ပညာရှင်များကို ခန့်အပ်ထားရှိပါသည်။ ယခု မျိုးစေ့အရည်အသွေးစစ်ဆေးခန်းသည် ISTA နှင့် ISO/IEC: 17025:2005တို့၏ မျိုးစေ့ဆိုင်ရာ အရည်အသွေး စံနှုန်းများကို လိုက်နာထားပါသည။ တနှစ်လျှင် စပါးအများဆုံး ရိတ်သိမ်းချိန် ဖြစ်သည့် မိုးကြို ကာလ တစ်ဝိုက်တွင် မျိုးစေ့ နမူနာ အများဆုံး ၁၀၀၀ခန့်ကို စမ်းသပ်နိုင်သည့် ပမာဏရှိပါသည်။
The Chief Minister getting briefed about the seed testing precedures from the Seed Lab in Charge Ma Nyein Nyein Toe မျိုးစေ့ဓာတ်ခွဲခန်းမှ တာဝန်ခံ မငြိမ်းငြိမ်းတိုးမှ တိုင်းဒေသကြီး ၀န်ကြီးချုပ်အား မျိုးစေ့ စမ်းသပ်ခြင်း လုပ်ငန်းအဆင့် များကို ရှင်းလင်းတင်ပြစဉ်
The RSSD team briefing the Chief Minister about the Quality Management System for the seed lab RSSDမျိုးစေ့ အဖွဲ့မှ မျိုးစေ့ဓာတ်ခွဲခန်းတွင် ထားရှိသော အရည်အသွေး ကိုင်တွယ်မှု စနစ်နှင့် ပတ်သတ်၍ တိုင်းဒေသကြီး ၀န်ကြီးချုပ်အား ရှင်းပြစဉ်
RSSD team demonstrating the digital data management software designed for the seed lab. This system can be readily adopted by any other seed lab in Myanmar RSSD မျိုးစေ့အဖွဲ့မှ ဒစ်ဂျစ်တယ် စနစ်ဖြင့် မျိုးစေ့ဓာတ်ခွဲခန်းတွင် အကောင်အထည်ဖော်ထားသော ကိုင်တွယ်စီမံနိုင်သော ယခုစနစ်သည် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ မျိုးစေ့ဓာတ်ခွဲခန်းများတွင် အလွယ်တကူ လက်ခံ ကျင့်သုံးနိုင်သော စနစ်လည်းဖြစ်ပါသည်။
Demonstration of Seed Physical Purity analysis မျိုးစေ့ဆိုင်ရာ သန့်စင်မှု ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအား လက်တွေ့ပြစဉ်
The Deputy Director General of Union DOA, U Thet Zin Maung delivering the welcome speech စိုက်ပျိုးရေး မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ဦး သန့်ဇင်မောင်မှ အဖွင့် အမှာ စကား ပြောကြားခြင်း